हेर्नुस बुलेटप्रुफमा राउतको दस्ता, सहमति तीन दिनमै तोडियो ! - Nepal Bahas Nepal Bahas
हेर्नुस बुलेटप्रुफमा राउतको दस्ता, सहमति तीन दिनमै तोडियो !
प्रकाशित मिति : २७ फाल्गुन २०७५, सोमबार ०७:४४
जनकपुरधाम । केपी शर्मा ओली सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरेका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक सिके राउतको असलि रुप सहमति गरेको ३ दिनमै देखिएको छ ।
आइतबार काठमाडौंबाट जनकपुर आएका राउतलाई सुरक्षा दिन उनका निजी सुरक्षाकर्मीहरु विमानस्थलमा बुलेटप्रुफ ज्याकेटसहित देखिएका हुन्। यसअघि विभित्र कार्यक्रमहरुमा सम्बोधन गर्न राउत पुगेपनि यस्तो पहिरनमा कहिले नदेखिएका सुरक्षा दस्ता पहिलो पटक जनकपुर विमानस्थलमा देखिएका छन्।
राउतका सुरक्षा दस्ताले सरकारी सुरक्षाकर्मीझैं बुलेटप्रुफ ज्याकेट, टाउकोमा रातो कपडा र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन लेखिएको झण्डा, कालो मास्कले मुख छोपेका, आँखामा कालो चशमा लगाएका थिए।
राउत आउँदा भिडभाड व्यवस्थापन गर्न, अनावश्यक प्रश्न नगर्न तथा सुरक्षा प्रबध मिलाउन सुरक्षा गार्ड खटाइएको उनका एक समर्थकले बताए। सुरक्षा दस्ता पहिले देखि नै तालिम प्राप्त रहेको बताइएको छ।
यसका साथै राउतले सरकारी सुरक्षा गार्डसमेत पाएका छन्। राउत जनकपुर विमानस्थलमा ओर्लीनुपूर्व जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट दुइजना सरकारी सुरक्षा गार्ड भिआइपी कक्षमा पुगिसकेका थिए। राउतले एकजना असई र प्रहरी जवानसहित दुइजना सरकारी सुरक्षा गार्ड दिइएको छ।
राउतकै सामुन्‍ने स्वतन्त्र मधेशको नारा
सिके राउतले पृथकतावादी आन्दोलन त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आएको सरकारले दाबी गरिरहेपनि उनका कार्यकर्ताहरुले स्वतन्त्र मधेशको नारा घन्काएका छन्। अखण्ड र स्वाधिन नेपालसहित सरकारसँग ११ बुँदे सहमतिपश्चात पहिलो पटक जनकपुर झरेका राउतकै सामुत्रे उनका कार्यकर्ताहरुले बिखण्डनकारी नारबाजी गरेका थिए। कार्यकर्ताहरुले नाराबाजी गरिरहँदा राउत भने मौन थिए।
‘फ्रि मधेश’ लेखिएका झण्डा बोकेर राउतलाई स्वागत गर्न जनकपुर विमानस्थल पुगेका कार्यकर्ताहरुले हिन्दी भाषामा ‘हमको चाहिए आजादी, मधेश देश ले के रहेंगे, नेपाली उपनिवेश मुर्दाबाद’ जस्ता नारा लगाएका छन्। राउतलाई स्वागत गर्न जनकपुर विमानस्थलमा सिरहा, सप्तरीलगायतका जिल्लाबाट समर्थकहरु पुगेका थिए। समर्थकसहित विमानस्थलबाट निकलेको र्‍याली नगर परिक्रमासमेत गरेको थियो।
पत्रकारसामु केहि बोलेनन् राउत
जनकपुर आउने भएपछि उनको प्रतिक्रिया लिन सञ्चारकर्मीहरु विमानस्थल पुगेपनि सिके राउतले केहि बोलेनन्। सरकारसँग भएको सहमतिबारे राउतको प्रतिक्रिया लिन झण्डै दुइ घन्टा विमानस्थलमा कुरेर बसेका थिए।
राउत विमानबाट ओर्लिएको तस्विर लिन जाँदा उनका कार्यकर्ताहरुले विमानस्थलको भिआइपी कक्ष नियन्त्रणमा लिई सञ्चारकर्मीहरुलाई घेरामा पारेका थिए। तस्विर लिन किन रोकेको भन्दै सञ्चारकर्मीहरुले प्रश्नगर्दा राउत समर्थकहरुले उल्टै दुव्र्यवहार गरे। भिआइपी कक्षबाट बाहिर आउँदासमेत उनका निजी सुरक्षा दस्ताले सञ्चारकर्मीहरुलाई उनी नजिक पुग्न दिएनन्।